Intuthuko engokomoya, I-Dream Interpreter
Izwe lamaphupho ligcwele izimfihlakalo kumuntu. Ezinye izithombe nezigcawu ezivela ekuphileni kubonakala kuwe, kodwa zivelaphi ekhanda lethu? Bakusho ukuthini? Sihlale sinesithakazelo sokwazi incazelo yamaphupho ethu, ngoba lokhu sifunda izincwadi zokuphupha kanye nabahumushi. Kuye kwafakazelwa ukuthi izindinganiso zokulala ezinsukwini zesonto zihluke kakhulu komunye nomunye. Uma uphupha into efanayo ngezinsuku ezahlukene, khona-ke inani lizobe lihlukile.
Ukulala kusukela ngeSonto kuze kube ngoMsombuluko
Qinisekisa ukulalela imibono yakho, bayokutshela izinkathazo nezenzo eziseduze. Okushiwo amaphupho ngamanani nangezinsuku zeviki kuhluke komunye nomunye. Manje okuningi ngamaphupho kusukela ngeSonto kuya ngoMsombuluko. Yimiphi imizwelo onayo? Ngabe usuka izinyembezi emehlweni akho? Uzwa ubuhlungu? Lungiselela usuku olunzima. Uma ubhekana nomzwa wokukhululeka nenjabulo, ngalolo suku uthembisa ukuthi ujabule futhi ujabule. Uma uphupha ngeqhwa, kusho ukulimala endaweni ethile. Nakuba amaphupho ngoMsombuluko futhi obhekene nokubaluleka kwezinkathazo nezinkinga ezithile, ungalindeli into embi kakhulu.
Amaphupho kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesibili
Chaza izindinganiso zokulala kahle, ngezinsuku zeviki. ULwesibili uhlukile ngoba uxwayisa mayelana nezingxabano zesikhathi esizayo. Lezi zinsuku uzothola izithombe ezigqamile kakhulu eziveza konke okusemandleni akho. Lena indlela enhle yokuzibona yona ngaphandle. Uma ubuthongo buzolile, khona-ke ngesikhathi semini uziphathe ngokuqiniseka, ungalindeli izingxabano. Uma uzwa imizwelo yesiphepho, khona-ke lokhu kuyisignali ecacile yokwenza. Ungama, phatha isinyathelo kanye nezimfanelo zobuholi.
Amaphupho kusuka ngoLwesibili kuya ngoLwesithathu
Ngalesi sikhathi sisebusweni bePlanethi, manje kufanelekile ukubheka ibhuku lephupho, incazelo yamaphupho ngezinsuku zeviki kunomthelela omkhulu. Uma ngoLwesithathu uphupha isithombe esicacile, khona-ke sikhuluma ngemibono emisha nemihlangano emnandi. Uma ungakhumbuli ukuthi yini ophuphe ngalobu busuku, lokhu kubonisa ukuthi ulahlekelwe okuthile, ukhohlwe. Sicela uqaphele ukuthi amaphupho angokwesiprofetho.
Amaphupho kusukela ngoLwesithathu kuya ngoLwesine
Yini lezi zibonakaliso ezisithembisa zona? Qiniseka ukuthi uchaza izindinganiso zokulala ngezinsuku zesonto. ULwesine uhlukile ngoba awuthathi ulwazi mayelana nokuphila komuntu siqu, kodwa ukhombisa indlela efanele ekuphileni. Ngenxa yamaphupho anjalo, umuntu angenza isinqumo esifanele, esizoletha inzuzo enkulu.
Iphupha kusukela ngoLwesine kuya kuLwesihlanu
Zibizwa ngokuthi iziprofetho. Kulolu suku sithonywe uVenus. Manje siza nezithombe ezinhle zenyama ezizosisiza ukuba siqonde izimpilo zethu, sonke siyaqonda ezingeni lemizwa.
Amaphupho kusukela ngoLwesihlanu kuya ngoMgqibelo
Lalela imizwa yakho. Ukuqondisa kahle leli phupho kuzokusiza wena kuphela, kodwa futhi uvale abantu, izihlobo. Qaphela, qiniseka ukuthi ukhumbule imininingwane, bheka amanani wephupho ngezinsuku zeviki. NgoMgqibelo kuyisimo sekusasa lakho, esikhathini esizayo esiseduze.
Amaphupho kusuka ngoMgqibelo kuya ngeSonto
Nakani abantu obaphuphayo kanye nomzwelo jikelele. Uma iphupho lilula, kumnandi, ngakho bonke abahlanganyeli kulesi sithombe bakhanyisa indlela yakho yokuphila, ngaphandle kwalokho, kusho okuphambene nalokho. Ngalolu suku unikezwa ithuba elihle lokubhekana nalabo bantu abasendaweni yakho esheshayo.
Ukuhumusha iphupho: ukuphanga - incazelo nokuchazwa kokulala
Ibukeka bunjani ama-panties? Ukuhumusha: incazelo, incazelo
Ukuhumusha iphupho: insimu kakolweni. Insimu iphupha ngani
Bafuna ukubulala - ibhuku lephupho. Ukuchazwa kwamaphupho
Ngiyazi iphupho: ngithini iphupho lami elithandayo?
Ngemlomo - kunjani? izimpendulo ezilula futhi enemininingwane zemibuzo evamile
Ibhere amanzi. Uhlobo ezingenamgogodla ezincane
Omunye-ipayipi bafudumale system nge kwegazi ophoqelelwe: umdwebo, isithombe, ukubuyekezwa
Puncher emise ubuhle ukuthi kudala
Into ezithakazelisayo kakhulu emzini wakho ozithandayo, Iphosta Izhevsk
Indlela yokunakekela u-bamboo ukuthola isitshalo esimangalisayo
Le ngxoxo nomphathi abazoba: ezinye izinto zingcono bangagqoki emhlanganweni?
Ukukhathazeka - ke ...